ဘက်ပေါင်းစုံမှ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးသမားများ Facebook အပါအ၀င် အွန်လိုင်းမီဒီယာ၌ နေရာယူမှု များလာခြင်းအတွက် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော ဥပဒေတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းရေး လိုအပ်လာ ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
Postado Monday, May 21, 2012 at 9:26 AM
Myanmar Express ၀က်ဘ်စာမျက်နှာတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်လေးစားမှု ရရှိထားသည့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ညစ်ညမ်းစွာ ပုတ်ခတ် ဖော်ပြထားချက်များ
ဘက်ပေါင်းစုံမှ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး သမားများမှာ Facebook ကဲ့သို့သော လူမှုကွန်ယက် ၀က်ဘ်ဆိုက်များ အပါအ၀င် အွန်လိုင်းမီဒီယာများ၌ နေရာယူမှုများလာကြောင်း အင်တာနက် သုံးစွဲသူများက ပြောဆိုကြပါသည်။
အွန်လိုင်းမီဒီယာ အသီးသီးသို့ ၀င်ရောက်နေရာယူလာသည့် ၀ါဒဖြန့် ချိရေးသမားများမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကို (အထူးသဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အခြားနိုင်ငံရေးသမားများ၊ မီဒီယာသမားများ) ပြုလုပ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၅ ခုနှစ် အချိန်တွင် ဘလော့ရေးသားမှုများ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ေ ပ်ါပေါက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၀၆ ခုနှစ် နှင့်၂၀၀၇ခုနှစ် အချိန်များတွင် ဘလော့ရေစီးအား ကောင်းစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရ(သို့မဟုတ်) အစိုးရကိုယ်စား ရေးသားသည့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ဘလော့များ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများ ရေးသားခဲ့ကြသည့် ဒေါင်းကွင်း၊ မောင်ဒိုင်း၊ နေနတ်နွယ် အစရှိသူတို့၏ ဘလော့စာမျက်နှာများ ၌ ရေးသားမှုများကို အစိုးရဘက်မှ ကျေးစေတမန်နှင့် အခြားဘလော့များ မှ အပြန်အလှန် ချေပပြောဆိုခဲ့ရာမှ အစိုးရ၏ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ဘလော့များစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်ကပင် အစိုးရနှင့်အတိုက်အခံ နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ဘက်ပေါင်းစုံ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ဘလော့များရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းအချိန်တွင်မူ ပြည်တွင်းအင်တာနက် သုံးစွဲသူများအကြား လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်သော Facebook ရေစီးစတင်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ပါသည်။ Facebook ရေစီး အားကောင်းလာချိန်တွင် ဘလော့ရေးသားသူ အများစုမှာ Facebook ဘက်သို့ ကူးပြောင်းလာသဖြင့် ဘလော့ရေးသားမှုများ အားလျော့သွားသော်လည်း ဘက်ပေါင်းစုံ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးဘလော့များမှာ မူခိုင်မာစွာ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း Facebook ၏ အားသာချက်ဖြစ်သော သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်ခြင်းကို အားပြု၍ ဘလော့နှင့် Facebook စာမျက်နှာများကို တွဲဖက်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ၊ အပုပ်ချမှုများကို လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါသည်။
အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ၏ လေးစားမှု အပါအ၀င် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုကိုပါ ရရှိထားသည့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဓိကထားတိုက်ခိုက် . . .
၂၀၁၁ခုနှစ်သို့ ရောက်ရှိချိန်၌ ဘက်ပေါင်းစုံဝါဒဖြန့်ချိရေး ဘလော့ပေါင်းများစွာ ရှိလာသည့်အနက် Myanmar Express (www. myanmar-express.net) နှင့် Voice of Myanmar (doctorsatephwar. blogspot.com) အစရှိသည့် ၀က်ဘ်စာမျက်နှာ နှစ်ခုမှာ သိသာထင်ရှားသော ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ၀က်ဘ်စာမျက်နှာများ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
Myanmar Express ၀က်ဘ်စာမျက်နှာ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ၏ လေးစားမှုအပါအ၀င် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုကိုပါရရှိထားသည့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဓိကထား တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“အရင်တုန်းကလည်း သတင်းစာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အလွန် ပေါ့လေ၊ ယုတ်ယုတ်မာမာတွေ ရေးပြီး တိုက်ခိုက်တာတွေကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အခု အွန်လိုင်းမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့လည်း သိရတယ်။ ကြားနေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက်ရော၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက်ရော လုံးဝ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်က အဲလိုပြောချင်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်တွေဟာ လောကပါလတရား နဲ့လည်း မကိုက်ပါဘူး”ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းကြိုင် ကပြောပါသည်။
“လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အပုပ်ချသည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်ရင် စွပ်စွဲပြောဆိုသည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီအရာတွေဟာ မမှန်ကန်ဘူးဆိုရင် ဝေဖန်ခံရတဲ့သူ၊ အပုပ်ချခံရတဲ့ သူအနေနဲ့ ပြန်လည်ပြီး တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိ ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဝေဖန်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်လို့ရတယ်။ ပုပ်ခတ်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်လို့ရတယ်။ အပုပ်ချခြင်းတွေ ပြုလုပ်လို့လည်း ရတယ်။ ပြောဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာ မှန်ကန်မှုမရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ဥပဒေကို ကျူးလွန်တာလို့ပဲလို့ ကျွန်တော် ပြောပြပါရစေ”ဟု အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးဇေယျာသော်က ပြောပါသည်။
Myanmar Express ၀က်ဘ်စာမျက်နှာ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အဓိကထားပြီး တိုက်ခိုက်သည့်နည်းတူ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အပါအ၀င် အခြားသော နိုင်ငံရေးသမားများကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ Myanmar Express ၀က်ဘ်စာမျက်နှာ နည်းတူ Voice of Myanmar ဘလော့မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးသမားများကိုပင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်လွှတ်တော်သို့ ၀င်ရောက်သွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Eleven Media Group ကို တိုက်ခိုက်ခြင်းအား အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးThe Voice ၊ YPI (Yangon Press Internation) အစရှိသည့် ပြည်တွင်း မီဒီယာများကို တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါသည်။
“Voice of Myanmar ကို လေ့ လာကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရည် ရွယ်ချက်က Myanmar Express နဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ထဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်သွားချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေက မီဒီယာတွေဘက် လှည့်လာပါတယ်။ VOM က နေ ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား နာမည်နဲ့ EMG (Eleven Media Group) ကို အများဆုံး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။၂၀၁၁ခုနှစ် ဇူ လိုင်လထဲမှာ EMG ကို နာမည်တပ် ပြီး တိုက်ခိုက်မှု စတင်ပါတယ်။ EMG ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာရှိတဲ့ Comment တွေကို အကြောင်းပြုပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ စက်တင်ဘာလထဲမှာ နှစ်ကြိမ်၊ အောက်တိုဘာလမှာ တစ်ကြိမ်၊ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ငါးကြိမ်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလထဲမှာ နှစ်ကြိမ်၊ နောက်၂၀၁၁ခုနှစ်မေလထဲမှာ နှစ်ကြိမ်စသဖြင့် EMG ကို ခေါင်းစဉ် တပ်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဒါလားဟဲ့ စတုထ္ထ မဏ္ဍိုင်၊ စိတ်ပျက်မိတယ် စတုထ္ထ မဏ္ဍိုင်ရယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေတပ်ပြီး ပြည်တွင်းဖြစ် အိမ်ကျယ် စတုထ္ထမဏ္ဍိုင်၊ ပြည်တွင်းဖြစ် ခပ်ညံ့ညံ့မီဒီယာ ဒီလို စကားလုံးတွေ သုံးစွဲပြီး တိုက်ခိုက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု Eleven Media Group မှ အကြီးတန်း အယ်ဒီတာ ကိုနေထွန်းနိုင်က ပြောပါသည်။
“သူတို့ရဲ့ ရေးသားပုံတွေကို ပြန် ကြည့်ရင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက် မှုကို တိုက်ရိုက် လုပ်လာခဲ့တာပါ။ နောက် ပြီးရေးဟန်တွေက ပုံစံသုံးမျိုးလောက် ကွဲထွက်နေတာမို့ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘဲ သုံးလေးဦးဝိုင်းပြီးရေးတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Smart News ဂျာနယ်အတွဲ (၁)၊အမှတ်(၆)မှာ တော့ ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားရဲ့ နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများအပေါ် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား၏ အမြင်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။Smart News ဂျာနယ်ရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်က ဦးခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)ပါ။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ထုတ်တဲ့ ဂျာနယ်တစ်စောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး သတင်းမှားတွေကို ပြန်လည်ချေပဖို့နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန် ချက်တွေကို ဦးစားပေးဖော်ပြဖို့ အတွက် ဒီဂျာနယ်ကို ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီး ထုတ်ဝေခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားနဲ့ Voice of Myanmar ဘ လော့ဆိုတာဟာ Smart News ဂျာနယ် ဒါမှမဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ တိုက်ရိုက် ပတ်သက်နေတဲ့သူ တစ်ဦးလားဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်”ဟု ကိုနေထွန်းနိုင် က ဆက်လက် ပြောကြားပါသည်။
“ကျွန်မကြားဖူးတာတော့ ခုလို website တွေဖွင့်ပြီး တိုက်ခိုက်ရေးသား ကြဖို့အတွက် သေသေချာချာ တာဝန်ပေး assign ချထားပြီးတော့ကို လုပ်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကို တကယ်အချိန်ပေးပြီး သေသေချာချာ လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းဆို eagerly လုပ်ဖို့ လွယ်မှမလွယ်တာ။ ပြီးတော့ အချိန်အရ၊ အင်တာနက်မြန်နှုန်းအရ၊ တစ်ယောက်တည်းက ဘယ်လုပ်နိုင်မလဲ” ဟု စာရေးဆရာမ ဒေါ်မေငြိမ်းက ပြောပါသည်။
ထို့အပြင် သိသာထင်ရှားသော အချက်အနေဖြင့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ဘလော့ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမှာ ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် အကြောင်းအရာတစ်ခု ဦးတည် တိုက်ခိုက်လေ့ ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“၀ါဒဖြန့်ချိရေး ဘလော့ဂ်တွေဟာ တလေသံတည်း ထွက်တယ်၊ ပြီးတော့ တခုနဲ့တခု အချိတ်အဆက် ရှိတယ်။ သူများမရနိုင်တဲ့ အချက်အလက်၊ ပုံတွေတင်တတ်တယ်။ ဥပမာ - ရန်ကုန်မှာ ဗုံးစမ်းသပ်စဉ် ပေါက်ကွဲပြီး သေဆုံးတဲ့ပုံတွေလိုမျိုး။ ၂၀၀၇ကစပြီး လေ့လာခဲ့ရသလောက် သူတို့စရေးစဉ်ပဲ ဟုတ်သလိုလို ပရိသတ်ရှိခဲ့ပေမယ့် နောက်တော့ ချဉ်ဖတ်ဖြစ်ကုန်တာ များပါတယ်။ အခုရှိတဲ့ ပရိသတ်ဆိုတာလည်း အလံရှူးတွေ၊ သူတို့သားသမီး မကင်းရာ မကင်းကြောင်းတွေနဲ့ မသိနိုးနား အင်တာနက်သုံးစွဲသူလောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအမာခံတွေ က သွားတောင် ဖတ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု နိုင်ငံရေးဘလော့ဂါနှင့် ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
သို့သော် ဘက်ပေါင်းစုံဝါဒ ဖြန့်ချိရေးသမားများ အနေဖြင့် Facebook ကိုအသုံးပြုပြီး ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြပါသည်။ Facebook သည် ဘလော့ထက် အားသာချက်များစွာရှိနေပြီး မိမိဖြန့်ဝေလိုသော အကြောင်း အရာကိုလည်း အလျင်မြန်ဆုံး ဖြန့်ဝေနိုင်ကာအသုံးပြုရ လွယ်ကူသဖြင့် ၀ါဒဖြန့်ချိသူများ အနေဖြင့်Facebook ကို ပိုမိုသုံးစွဲလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သုံးစွဲရာတွင် နာမည်ဝှက်များဖြင့် Account များစွာ သုံးစွဲပြီးလုပ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူတို့က ရေများ ရေနိုင်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့လေ။ လူညီရင် ဤကို ကျွဲလို့ဖတ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ဖြစ်အောင် ၀ိုင်းလုပ်နေကြတာ။ သူတို့က အရင်သုံးနေတဲ့ စကားလိုပဲ။ မဟုတ်တာကို ပြောပါများရင်ဟုတ်တာဖြစ်သွားတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဆိုတဲ့ အယူအဆအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး သူတို့ လုပ်နေတာ။ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ပြီးတော့ ကိုလုပ်နေတဲ့ သဘော ရှိတယ်”ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မြင့်ကပြောပါသည်။
ဘက်ပေါင်းစုံ ၀ါဒဖြန့်ချိသူများထဲတွင် အစိုးရဌာနများပါဝင် ပတ်သက်နေသည့် ယူဆမှုများ ရှိနေသည့် အချိန်၌ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ခံယူချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုများမှာ ယနေ့ထိတိုင်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်သူများက ပြောဆို ပါသည်။
“တကယ့်လက်တွေ့အနေအထား မှာလည်း မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက် လို့ ပြောပေမယ့်လို့ အဲဒီမီဒီယာရဲ့စာ ဖတ်ပရိသတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆို တဲ့ အပေါ်မှာ ပြဿနာရှိတယ်။ ဥပမာ A နဲ့ B နဲ့တိုက်တယ်။ A ရဲ့ စာဖတ်သူက ထောင်ဂဏန်းလောက်ပဲရှိပြီး B ရဲ့စာဖတ်သူက သောင်းဂဏန်းလောက် ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ စာစောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ရဲ့ ၀က်ဘ်စာမျက်နှာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူရေးတဲ့စာတွေကို သူ့ရဲ့ စာဖတ်သူတွေက လက်ခံတယ်၊ သဘောကျတယ်ဆိုရင် သူရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ် က တက်လာမယ်။ ကျွန်တော်တို့က ရလဒ်ကို ကြည့်ရမယ်။ သူတို့ ထူထောင်ထားတဲ့ မီဒီယာတွေ ရေးတဲ့သားတဲ့ အပေါ်မှာ လူတွေကဖတ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုရလဒ်တွေ ထွက်လာလဲ။ ရ လဒ်ဆိုတာ လက်တွေ့ဘ၀ထဲမှာကြည့်ရမှာကိုး။ ရလဒ်က အွန်လိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာ ကြည့်လို့မရဘူး။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အွန်လိုင်းမှာ ရေးလိုက်တယ်။ ရေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ စာဖတ်သူပေါင်းစုံ တက်ဖတ်တယ်။ ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ အဲဒီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုက အပြင်မှာ ဘာဖြစ်လာလဲ။ အဲဒါကို ကြည့်ရမယ် ထင်တယ်”ဟု နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများ ရေးသားနေသည့် ဒေါက်တာ ရန်မျိုးသိမ်းက ပြောပါသည်။
“ နိုင်ငံမှာ အတိုက်အခံ အင်အားစုလည်း အပြိုင်ရှိလာပြီဆိုတော့ ပြိုင်ပွဲဆန်လာတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာရန်လိုတာတွေ၊ ညစ်ပတ်တာတွေ၊ မဟုတ်မတရားတွေ ပါလာတော့ တိုက်ပွဲဆန်လာတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ပြိုင်တိုက်ရသူရဲ့ အရည်အချင်း၊ အဆင့်အတန်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်စံမီ မမီဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး ခုလိုရှက်စရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေတိုက်ပွဲထဲ ပါလာတော့တာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေ သံသယဖြစ်စရာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ”ဟု စာရေးဆရာမ ဒေါ်မေငြိမ်း က ပြောပါသည်။
ဘက်ပေါင်းစုံ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းများတွင် အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်နေသည် ဆိုပါက ဒီမိုကရေစီသို့ သွားရာလမ်းကြောင်းအပေါ် သံသယဖြစ်စရာ မေးခွန်းထုတ်စရာများ ရှိနေသည့်နည်းတူ အခွန်ထမ်းပြည်သူများ ၏ ငွေဖြင့်ဒီမိုကရေစီ ပျက်စီးမည့် လုပ်ရပ်များကို မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိပါသည်။
“အခွန်ထမ်းတွေရဲ့ ငွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း နည်းတဲ့အင်အား၊ နည်းတဲ့ငွေကြေး မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ တစ်ဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့ ငွေကြေးတွေ သုံးထားတာကလည်း မနည်းဘူး” ဟု ဦးကြည်မြင့်က ပြောပါသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများကို လျော့ချပြီး တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် PR(Public Relations) များ ထားရှိသင့်ကြောင်း အကြံပြုပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေပါသည်။
“၀န်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ ထားရပါမယ်။ အဲဒီကတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ချင်တာတွေ၊ သတင်းမှားတွေကို ချေပချင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး PR ကို သေသေချာချာ ထားရမှာပါ”ဟု Myanmar's Net မှ မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဇော်ထွဋ်က ပြော ပါသည်။
လက်ရှိအချိန်၌ အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုများ ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှုများ၊ အပုပ်ချမှုများ ပိုမိုများပြားနေပြီး ထိုလုပ်ရပ်များအတွက် ကာယကံရှင်များမှ ပြန်လည်တရားစွဲဆိုနိုင်မှု အခွင့်အရေးမှာ နည်းပါးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ် ဖြူဖြူသင်းက ပြောပါသည်။
“ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်မှာတစ် လျှောက်လုံးပဲ အရင်ကတည်းကလည်း အဲဒီလိုလုပ်နေတာတွေ ရှိတယ်။ တစ်ကယ်ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် တရားဝင်လို ပုံစံမျိုးကို လုပ်နေကြပေါ့နော်။ အမှန်တစ်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ ရှိရင် Internet တွေဘာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တရားစွဲတာတွေ မဟုတ်တဲ့ သတင်းတွေ တင်လို့ရှိရင်တောင် ပြန်ပြီးတော့ တရားစွဲခွင့်ရှိတယ်။ ပြန်ပြီးဖြေရှင်းခွင့်ရှိတယ်။ အဲလိုမျိုးရှိနေတဲ့ အခါကြတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်မှာကြတော့ အခုအချိန်အထိ အဲလိုအခွင့်အရေးတွေက မရှိသေးဘူး” ဟု ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန် အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ ရှိနေသော်လည်း ထိုဥပဒေ မှာ အားနည်းချက်များစွာ ရှိနေသည့် အပြင် ဖျက်သိမ်းသင့်သည့် ဥပဒေဖြစ်နေသည့်အတွက် ခေတ်နှင့်လျှော်ညီ ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် မလျော်ညီသည့် အရေးအသားများဖြင့် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်လာမှုများအတွက် Cyber Law ကဲ့ သို့သော ဥပဒေတစ်ရပ်ပေါ်ထွက်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိနေပါသည်။
“ဒီဟာမျိုးက Cyber Crime လိုပဲ။ Cyber Police တွေ ထားရမယ်ဗျာ။ Cyber Law ကတော့ ရှိရမှာပဲ။ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ နည်းပညာကို အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ လူတွေ ပေါ်ကို ပေါ်လာမှာပဲလေ။ အဲလို လူမျိုး တွေကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကျတော့ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ခိုင်မာတဲ့၊ အဆင့်အတန်းမီတဲ့ Cyber Law က ရှိရမှာပေါ့။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းက သူတို့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ မရဘူး။ ဒီ အဖွဲ့အစည်းကို Cyber Law နဲ့ ကျွန်တော်တို့က ပြန်ပြီးတော့ check and balance လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ပေါ့။ အဲဒီနှစ်ခု Cyber Law ရော Cyber Police ရော အရေးတကြီး လိုအပ်တယ်လို့ ထင်တယ်”ဟု ဘလော့ဂါ ကိုနေဘုန်းလတ်က ပြောပါသည်။
ဘက်ပေါင်းစုံဝါဒ ဖြန့်ချိရေးဟု ဆိုရာတွင် အစိုးရဘက်မှ ၀ါဒဖြန့်ချိသူများကိုသာ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ အတိုက်အခံများဘက်မှ ၀ါဒဖြန့်ချိသူများကိုပါ ဆိုလိုကြောင်း၊ လာဘ်စားမှုများ၊ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများကို အချက်အလက် ခိုင်မာစွာ ရရှိထားသည် ဆိုပါက ဝေဖန်ရေးသားနိုင်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုကို ဦးစားပေးပြီး လုပ်ဆောင်သင့်သည် ဟူသော သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေပါသည်။
“ဘက်ပေါင်းစုံဝါဒဖြန့်ချိရေး ဆိုတာ အစိုးရဘက်ကလူတွေကို တင်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အတိုက်အခံ ဘက်ကလူတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စတွေ၊ ပြည်သူလူထု နစ်နာတာတွေကို ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကိစ္စတွေ နဲ့မဆိုင်ဘဲ လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ဦးတည်ပြီး အကြောင်းမဲ့ တိုက်ခိုက်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာအနေနဲ့ လက်မခံပါဘူး။ အစိုးရပိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မိသားစု အတွင်းရေးတွေ၊ အခြားပုဂ္ဂလိ ကဘ၀တွေကို မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲရေးသား အပုပ်ချတာမျိုးတွေ၊ ဒါမျိုးတွေ ကတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ တချို့တွေ ဆိုရင်လည်း ဒီမိုကရေစီကို အကြောင်းပြပြီး အချက်အလက်မှားတွေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာတွေကို လုပ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို ဝေဖန်ရေးသားမှုတွေဟာ အချက်အလက် တိတိကျကျနဲ့တာဝန်ခံပြီး ရေးသားတဲ့ ပုံစံပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်”ဟု Weekly Eleven အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးက ပြောပါသည်။
“ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ အွန်လိုင်းမီဒီယာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပရင့်မီဒီယာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို အခြေခံပြီးတော့ ခိုင်မာတဲ့ သတင်းအရင်းအမြစ် မရှိဘဲနဲ့ရေးသားတာမျိုးကို တားသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်လေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သတင်းရင်းမြစ် မခိုင်မာလို့ရှိရင် ဒီသတင်းကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ တစ်ဖက်မှာ ထိခိုက်မှုတွေ၊ သက်ရောက် မှုတွေရှိတယ်။ ဘယ်ဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အားနည်းချက် လိုအပ်ချက်ကို ပြောရ မယ်။ အစိုးရဖြစ်တဲ့ဘက်ရော၊ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ဘက်ရော။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းပေါ်ရေးတာပဲ။ ရေးလို့ရတာပဲ ဆိုပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင့်ရင့်သီးသီး ပြောတာတွေ ရှိတယ်။ မကြားဝံ့မနာသာ ပြောတာတွေ ရှိတယ်။ လက်ရှိ အနေအထား အရတော့ မြင်နေတာတွေက အွန်လိုင်းမှာ တချို့ရေး နေတာတွေက ဖတ်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့ အထိပေါ့လေ။ အဲဒီလောက်အထိ ဖြစ်သွားဖို့တော့ မလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့၊ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဒီလောက်ကြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ မြင်တယ်လေ”ဟု ဒေါက်တာ ရန်မျိုးသိမ်းက ပြောပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီအရ မိမိတို့ ၏ ခံစားချက်များကို တစ်ဦးချင်း လွတ်လပ်စွာဖြင့် ရေးသားပြောဆို နိုင်သော်လည်း သတင်းတစ်ခုအသွင်ဆောင်ပြီး ဖြန့်ဝေတော့မည်ဆိုပါက ရေးသားမှုနှင့်အတူ တာဝန်ယူမှုပါ ရှိသင့်သည်ဟူသောပြောဆိုမှုများ လည်းရှိပါသည်။ ထို့အပြင် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုအနေဖြင့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသည့် အဖွဲ့အစည်းကို ထားရှိသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများရှိပါသည်။
Copy From eleven Media
social Media နဲ့ အင်တာနက်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်ကတော့ ကိုယ့် Identity ကို ကိုယ်တန်ဖိုးထားဖို့ အလွန်အရေးကြီး ပါတယ်။ Social Media ရဲ့ နောက်ထပ်ပြဿနာက ကိုယ့်ရဲ့ ပုံရိပ် Identity ကို ပြင်ပမှာထက်ပိုပြီး လွယ်လွယ် ဖွက်ထားလို့ရတာပါပဲ။ Identity နှစ်ခုသုံးခုရှိချင်ရင်လည်း လွယ်လွယ် ရရှိနိုင်တာပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုအတုလုပ်လို့ လွယ်နေတော့င် Identity အတုတွေနဲ့ သတင်းမှားတွေ ဖြန့်တဲ့အတွက် သတင်းမှားတွေကလည်း လွယ်လွယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဘက်ကကြည့် ပြန်တော့လည်း လွယ်လွယ်ပြန့်နိုင်တာ သတင်းမှားတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းမှန်တွေလည်း လွယ်လွယ်ပြန့်နိုင်တာပါပဲ။ စကားကြီး စကားကျယ်ပြောရရင် အချိန်တန်တော့ အမှန်တရားက စကားပြောသွား မှာပါပဲ”ဟု Fair Way Web မှ ပရောဂျက်မန်နေဂျာ ကိုအိမောင်က ပြောပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အွန်လိုင်း မီဒီယာဆိုသည်မှာ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုး ရောထွေးနေသည့် အတွက်လူဆိုး၊ လူကောင်းဆိုသည်မှာ ဘက်တိုင်းတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သူများ က ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။